Eng Yarisow oo ka qeyb galay Shirka Guud ee Midowga Caasimadaha – Radio Daljir
Seteembar 5, 2018 6:19 g 0
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo uu wehelinayo Danjiraha Soomaaliya ee Turkiga Mudane Jaamac Cabdullaahi Maxamed ayaa ka qayb galay Shirka Guud ee Midowga Caasimadaha Adduunka oo maanta lagu qabtay magaalada Ankara ee Dalka Turkiga.
Shirkan ayaa diiradda lagu saaray hannaanka horumarinta caasimadaha, xallinta caqabadaha iyo jaangoynta qorshe howleedka Dawladaha Hoose.
Duqa Muqdisho ayaa khudbadda uu ka jeediyey shirka waxa uu kaga warbixiyey guulaha dhanka maamul iyo amni ee lagu tallaabsaday muddii la soo dhaafay iyo qorsheyaasha ay hiigsanayaan.
“Waxaan soo dhaweeynaynaa in Maamullada Caasimadaha ee ku bahoobay madashan ay dardar geliyaan is-dhaafsiga khibradaha dhanka Maamulka, tababarrada iyo xoojinta wada shaqeynta, si loo kabo maamullada Dawladaha Hoose ee dalalka soo koraya.”
Guddoomiye Yarisow ayaa ku bogaadiyey Maamulka Ankara iyo guud ahaan Dawladda Turkiga sida joogtada ah ee ay u garab istaageen Dawladda Hoose ee Xamar, iyagoona kaalin muhiim ah ka qaatay dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo celinta bilicda caasimadda.
Sidoo kale, Duqa Muqdisho ayaa u diray dhiggiisa magaalada Ankara Dr. Mustafa Tuna hambalyo ku aaddan xilka loo doortay ee guddoonka Midowga Caasimadaha Adduunka, muddada 2-da sano ah ee soo socota.
Dhanka kale, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa kulan doceedyo la qaatay qaar ka mid ah madaxda caasimadaha ee ka soo qeyb galay shirkan, isagoona kala hadlay sidii ay gacan uga gaysan laahaayeen tayeynta shaqaalaha Dawladda Hoose iyo kobcinta adeegyada asaasiga ah ee magaalada Muqdisho.
Warka Fiidnimo iyo Xuseen Madar, Daljir Bosasso (dhegayso)